Inona no atao hoe tetezana mangarangarana misy fakana an-keriny? - Valiny Tsara Indrindra
Tena > Valiny Tsara Indrindra > Fangalarana tetezana glute - valin'ny olana
Fangalarana tetezana glute - valin'ny olana
Inona no atao hoe tetezana mangarangarana misy fakana an-keriny?
Apetraho eo ambanin'ny lohalinao ny fehin'ny fanoherana ary mandry eo an-damosinao. Apetraho eo akaikin'ny anao ny tongotraglutearak'izay azo atao, sorohy ny sakany, ary atosiho mankany amin'ny valindrihana ny valahanao. Tazomy ity toerana ity amin'ny alàlan'ny fanatanjahan-tena iray manontolo rehefa manindry ny lohalinao ho any ivelany ianao ary miverina amin'ny toerana manomboka amin'ny fihetsehana voafehy.
Inona no mitranga ry zalahy? Jeff Cavaliere, ATHLEANX.com. Inona no resahintsika anio? Zahao hahitanao azy.
Jereo akaiky. Jereo akaiky. Mifantoka amin'izay tena zava-dehibe.
Ireo ny valahanao, ny valahanao; izay rehetra mety hadinonao. Ary hataoko izy - Jessi - kintan'ny seho. Izy ireo no ho kintana amin'ny fampisehoana eto anio satria mila izany raha te-hisoroka ny zavatra toy ny fanaintainana ianao satria ny zavatra lehibe indrindra hitako amin'ny olona manao fampiharana dia ny tsy fitandremana ireo mpitsikilo.
Ny tsy firaharahianao hanamafisana ny glute anao, indrindra amin'ny làlan'ny fanitarana. Ankehitriny kosa dia hampiteny anao kely aho. Ny gluteus mihitsy dia tsy manitatra afa-tsy amin'ny 10 ka hatramin'ny 15 degre.
Dia izay. Fanitarana valahana madio. 10 ka hatramin'ny 15 degre avy amin'ny 0,0 no mety eto, okay? Ka tsy hoe mila mampihatra fanitarana firy isika.
Ny tsy maintsy ataontsika dia tsy mitanila indrindra satria rehefa mijery ny fomba fanazaran-tena isan-karazany isika dia tsy manandrana manatona 0 mihitsy mba hialana amin'ny karazana toerana somary afrikanina. Raha mieritreritra ny fiorenan'ny fijoroantsika ianao dia karazana fijanonana izay midika fa ny valahantsika dia misy karazana fiolahana eto. Mila manitsy azy ireo fotsiny isika.
Farafahakeliny 0 degre, miverina amin'ny tsy fiandaniana. Ny fomba tokana hanaovana an'io dia ny fifanekenao amin'ny glute. Potsero ara-bakiteny araka ny tratrany ny borikinao mba hidirana amin'ny toerana tsy miandany, avelao aho hanoro anao ny fomba fandehany, raha toa ka maty izahay ary maty ianao ary miakatra ianao dia toa izao.
Eto ambany aho, mifamofo, manosika ary ho avy aho, ity dia toa ny tendron'ny fiandrasana maty. Saingy tsy dia velarina izahay. Izaho dia farafahakeliny farafahakeliny farafahakeliny eto.
Raha nanao izany aho ary nanakorontana ny takolako, dia ho nitarina tanteraka aho izao ary tafarina indray aho izao. Ankehitriny aho dia afaka miraikitra, miraikitra, midina, manosika, manindry ao amin'ilay fanitarana. Ka tianay ny hamita ny famerimberenana isaky ny mandeha.
Fenoy ny famerimberenana. Tsindrio eto. Okay manaraka.
Raha miondrika fotsiny aho, na dia miondrika fotsiny aza eto dia mirona hiankohoka isika, ary rehefa mifoha dia mazoto miondrika toy izany ary mijanona eo. Ny zavatra tiana hatao dia ny afaka miondrika amin'ny fanitarana hip tanteraka. Ka afatory fotsiny ny valahanao amin'ny alàlan'ny fanindriana.
Manana izany tombony fanampiny izany isika amin'ny alàlan'ny fametahana ny glute. Indraindray ny valahantsika dia manana fironana hiparitaka mandritra ny squat rehefa misokatra kely na amin'ny fomba hafa izy ireo noho ny tsy fandanjana eo amin'ny valahana. Andao lazaina fa manokatra kely toy izany izy ireo.
Rehefa manery ny glute isika dia hiorenantsika indray ary hiverina hilahatra, vonona ho amin'ny squat manaraka. Manondro ny lalana marina foana isika. Zavatra iray hafa ny fanitarana ny hip.
Ny olona dia manao daka valahana. Tsara. Fanatanjahan-tena tsara ho an'io ary eo am-pikatrohana azy izahay.
Miezaka miresaka izahay amin'ity herinandro ity. Noho izany dia tafiditra amin'ity toerana ity isika, manindry eto amin'ny feny, ary miakatra isika. Jereo anefa izany.
Jerevo ny fiolahana izay mbola ao anatin'io valahany io. Milentika toy izany. Midina ny feny, ary avy eo mitanondrika miakatra amin'ny valahako satria mbola mihetsiketsika eto aho.
Izany. Heveriko fa niakatra tany ambony rihana aho, fa jereo ange ny sisa tavela amiko. Miezaha, mamoritra, mamoritra, mamoritra; hatrany an-tampony.
Eo amin'ny toerako tsy miandany aho izao. Ankehitriny dia tsapako fa miasa be ny glutes-ko. Betsaka noho ny eto, fa isika kosa.
Izahay crank up ny reps mieritreritra fa nanao izay vitantsika no ezahina hatao, fa tena tsy nanao izany mandra-pahatongan'ny fiakarana hatrany. Nahoana no zava-dehibe daholo izany? Satria raha tsy manitatra amin'ny valahana isika dia ho hitantsika any amin'ny toeran-kafa izany, ho azoko amin'ny farany ambany. Ka raha miarina eto aho ary manandrana manitatra ary mahazo hatreto, dia hiezaka ny hihombo ny lamosiko hiarina bebe kokoa amin'ny fanitarana ny hazondamosiko.
Raha miakatra eto amin'ny maty aho ary miakatra ary tsy mahazo extension, dia izany no hataoko. Hitantsika hatrany izany. Mandrosoa amin'ny hazondamosin'ny lumbar mba ho hitantsika fa nahatratra ny fanitarana tanteraka.
Saingy tsy izany no tadiavinay. Amin'ny maha-mpitsabo ara-batana anao dia tokony ho afaka hahita olona ianao ka hiteny hoe: 'Inona no maharary anao?' Ny lamosiko ambany. 'Tsara, tsara.' Ny toerana voalohany tianao hijerena dia na amin'ny toerana eo ambany mivantana na any ambony.
Rehefa miandrandra isika dia mijery ny hazondamosin'ny hazondamosina. Rehefa mijery ambany isika dia mijery ny valahantsika mangataka vonjy ary asaina miantso vonjy rehefa tsy tokony hanao ilay asa. Ka izany rehetra izany dia mihombo loatra ny fanitarana ny lumbar raha toa ka mahavita tsara ilay asa ny andilana raha manatanjaka azy ireo amin'ny fomba mety ianao.
Ny zavatra farany holazaiko dia ny fampihetseham-batana lehibe hifantohana - indray, betsaka ny olona no mahazo an'io tsy mety eto io - miakatra haingana. Avy eo miasa ny valahana roa amin'ny fampiharana iray ihany. Mifoha eto isika.
Mahita olona manao an'io isika. Manana dumbbells eny an-tànany izy ireo, handeha hiakatra izy ireo. Eny ary, mandrosoa.
Eto, mandroso. Impiry aho no nahita olona nanao an'io? Mitsangàna. Tsy nanitatra volo feno mihitsy aho indray mandeha.
Eny, raha te-hiarina eto aho ary tsy nanao ny fanitarana hip feno rehefa nakarina aho, tamin'ity fomba ity rehefa nakarina ny soroko, lumbar extension, fa tsy fanitarana ny valahana. Ka avereno, angataho ny lamosiko hanao ny asa tsy nataon'ny valahako. Raha tokony ho izany, raha tena reraka aho, dia azoko antoka fa ny valahana no manao ilay asa.
Ka ny tiako atao dia ny mamita amin'ny lohalika. Rehefa tonga ny lohaliko, ity dia mitondra an'io hozatra gluteal io mankany amin'ny fanitarana tanteraka, na farafaharatsiny amin'ny fialanalanana tanteraka, manetsika mavitrika ny valahana eto amin'ny fanitarana. Tsy avelako hipetraka fotsiny izy ireo.
Ataoko ny valahako. Mandrosoa.Boom.Down.Boom.Down.Up.Down.Up.Down. Tsy ny mekanika ihany no tsara kokoa, fa hihamatanjaka ianao.
Manakatona ny famoahana angovo mitranga ianao rehefa mamaha ny zava-drehetra ao anaty rojika kinetika, rehefa tokony hifantoka marina eto isika. Manomboka eto ny zava-drehetra. Izany no masaka afovoanao, ary raha tsy manomboka mifantoka amin'ny fifanarahana mavitrika ianao dia hamela be eo ambonin'ny latabatra.
Tsara izany? Ry zalahy manantena aho fa nahita ity mahasoa ity ianao. Aza adino, a Tsy tsara raha manana na manana boriky isika. Miezaka ny manitsy anao aho ary manampy anao tsy ho boriky malemy.
Mahereza. Miasa toy ny atleta. Raha mitady drafitra tsikelikely hanaovana izany ianao dia mankanesa any amin'ny ATHLEANX.com izao ary mahazoa ny programa fiofanana ATHLEANX.
Mandritra izany fotoana izany, raha hitanao fa mahasoa ity lahatsoratra ity dia avelao etsy ambany ny hevitrao sy ny ankihibe. Ampahafantaro ahy izay tianao ho hitanao sy ho hitako. Hataoko izany afaka andro sy herinandro vitsivitsy.
Tsara izany, mihaona.
Manjombona ve ny fakana an-keriny?
Soso-kevitra.Fisamborana hipny fanatanjahan-tena sy ny squats dia samy manatsara ny tanjaka amin'ny vatanao ambany. Na izany aza, squatsmanaovatanjaka sy hery miaraka amin'ny hetsiky ny vatana feno mandritrafakàna an-kerinyfanazaran-tena kendrena manokana nyglute.21 Mey 2019
Inona no mitranga ry zalahy? Jeff Cavaliere, ATHLEANX.com. Androany dia hasehoko anao ny fomba hikendrena ny hozatra tsy dia mandroso sy malemy indrindra amin'ny vatanao ambany, afa-tsy ny fampiakarana.
Toy ny squats, deadlift ary azo antoka fa misy hetsika tongotra iray, satria ny vondrona hozatra resahintsika eto anio dia ireo mpitsikilo. Raha tsy hoe miezaka mafy ianao amin'ny fandaharam-potoanao hampiofanana io hozatra io, dia azo inoana fa raha tsy manao izany ianao, dia iharan'ny fahavoazana maro hafa eo amin'ny rojika kinetika. Ny ankabeazany dia eo amin'ny lohalika satria fantatray fa rehefa manana fahalemena sy tsy fandriam-pahalemana eo amin'ny valahana ianao dia misy fiatraikany amin'ny toeran'ny lohalika ary amin'ny ankamaroan'ny tranga dia mitarika torolalana, fanaintainana ary ratra amin'ny lohalika be loatra izany.
Ka ny azontsika atao amin'ny afovoan'ny gluteus dia ny fanaovana azy amin'ny fomba maro samihafa. Ny fomba voalohany hanaovana an'io dia ny fiakarana amin'ny rindrina eto, okay? Ento eto ny tongotrao. Tsy ity ny tongotra izay tena iasantsika.
Mba hahazoana ny gluteus medius dia tianay ny misintona ny valahany mankany amin'ny sisiny. Rehefa manao rojo mikatona isika dia toa hafa kely amin'ny fomba nentim-paharazana, satria ny olona dia fantatra amin'ny hoe fakana ankeriny ny valahany. Atỳ.
Mahitsy mankany amin'ny sisiny. Eny, rehefa mijoro miaraka amin'ny tongotray amin'ny tany izahay sy ny valahanao hatrany amin'ny ilany dia manosika ny tenanao hidina ianao; hitanao raha notohizako foana io, tsy misy hafa amin'izany rehefa tapitra eto ivelan'ny vatako ny feny. Ka lasa kamo fotsiny ianao.
Avelao ny tenanao hianjera amin'ny sisiny. Arotsaho amin'io lalana io ny valahanao. Ny hany zavatra mety hampiarina azy ireo ankehitriny, raha mahazo an'ity marina ity ianao, dia ny fihenan'ny gluteus eto, avelany hitodika.
Miankina. Tokony ho tsapanao fa manenjana azy io eto amin'ny valahanao, na dia somary somary obliquely aza izany. Tsapanao ny tsindry, alatsakao ianao ary kamo kamo Manosika ahy, mandatsaka azy aho ary kamo.
Raha tsy afaka manao ny 20 amin'ireto amin'ny fomba miadana sy nifanarahana ianao, manery isaky ny tsy ho may tsy ho zakao akory ny may, dia mahazo valahana tena malemy ianao. Na ny fanaovana fanazaran-tena toa ny squat aza rehefa tenenina ianao mba hihazona ny lohalinao mahitsy rehefa midina ianao dia ho sarotra be sy ho olana aminao rehefa miezaka hitazona ny lohalika ho salama ianao rehefa manao squats. fa misy ambaratonga samihafa ho an'ny olona samihafa.
Azontsika atao ny manasarotra izany amin'ny alàlan'ny fanampiana fanoherana sasany. Ka rehefa hitantsika fa ny atletantsika dia matanjaka amin'ny endrika bodyweight dia ampiantsika ny baolina, atsanganay ny valahantsika ho any amin'io baolina io, ary manao toy izany koa isika. Hamoaka isika, fa ny nampiana kosa dia ny fanoherana.
Eo am-piezahana ny hitondra ny baolina dia mila manohitra ny fanoherana ity baolina ity aho. Izany dia mahatonga azy io ho lasa helo mafy kokoa. Ka manandrana mitondra fiara acro ss ianao, izany koa dia miadana sy voafehy.
Atsofohy ny valahanao ary mivoaka ary avy eo misintona. Midina sy mivoaka ary mandroso mandra-pahatongan'ny haavony indray na somary miakatra kely aza. Ny tanjona eto dia, afaka manao 20 amin'ny fomba mahafinaritra sy miadana ary voafehy ve ianao nefa tsy maratra loatra ny valahanao ka tsy maintsy ajanonao? Angamba ianao mbola matanjaka kokoa aza, tsara izany satria tianay ny hihazona ny fahotan'ireo lohalika ireo ary mila matanjaka tsara ianao amin'izany.
Azonao atao ny mahatratra ny haavony feno eto, izany hoe manampy kofehy. Ataonao eo amin'ny valahanao ilay izy ary arofaho. Miankina amin'ny halaviran'ny halaviranao sy ny haben'ny fanoherana ao amin'io ligament io, dia vao mainka nataonao sarotra kokoa izao fanatanjahan-tena izao amin'ny fiezahana handresy ny fanoherana ny ligamenta.
Ka ny hevitra dia na inona na inona ambaratonga tadidinao; Tsy misy fomba hafa hanamafisana ity vondrona hozatra ity raha tsy hoe ampianarinao mivantana izy ireo. Tsy hikapoka azy ireo amin'ny squats-nao ianao, tsy hikapoka azy ireo amin'ny valin-fatinao, fa ireo fanazaran-tena ireo dia mbola misy fiantraikany lehibe amin'ny fahafahanao manana valahana matanjaka mba hahatratrarana azy ireo araka izay fara heriny. Ry zalahy, antenaiko fa nahasoa ity lahatsoratra ity.
Raha mitady programa fanaovana fanatanjahan-tena ianao izay tsy manadino ireo vondrona hozatra - satria fantatray fa manan-danja daholo izy ireo, misy antony izy ireo ao - tokony ho azonao antoka fa manatanjaka azy rehetra ianao ary manatanjaka azy ireo amin'ny làlana sy lalana mety, mba hahafahan'izy ireo miasa amin'ny fomba tiany hiaraha-miasa. Mandehana any amin'ny ATHLEANX. com izao ary mahazoa ny rafitra fiofanana ATHLEANX.
Mandritra izany fotoana izany, raha hitanao fa mahasoa ity lahatsoratra ity dia avelao etsy ambany ny hevitrao sy ny ankihibe ary ampahafantaro ahy izay tianao ho hita eto. Nahatratra olona 2 tapitrisa izahay tamin'ny fanohananareo tamin'ny fanampiana anay hanatratra an'io fotoana io, saingy tapa-kevitra aho fa tsy hiadana eto, hanohy hanome anao ny fampahalalana tsara indrindra azonay hita ao amin'ny YouTube Okay ry zalahy, izaho Hiverina eto aho afaka andro vitsivitsy hanantena ny hanao izany indray. Tsara daholo.
Inona ny fakana an-keriny an'i Bridge?
Torolàlana ho an'ny gluteFakana an-keriny tetezana
Mipetraha amin'ny tany eo an-damosinao ary apetraho amin'ny tananao ny tananao mba hisian'ny fitoniana. Aondriho ny lohalikao, ny tongotrao dia tokony hapetraka ny sakany soroka manakaiky ny fitombenanao. Atsipazo avy eo amin'ny voditongotrao, esory ny valahanao hiala amin'ny tany hitandrina ny lamosinao mahitsy. Tazomy eo an-tampony.
WINFREY: Miresaka amin'ny mpitsabo aretin-tsaina ao amin'ny Oniversiten'i Harvard John Mack isika anio, izay nanadihady ny tranga nahalalan'ny olona 100 farafahakeliny izay nilaza fa nalain'ny vahiny. Ny iray amin'ireo marary an'i Dr. Mack, Randy, dia nilaza teto fa ny fisamborana azy dia teo am-piomanana izy.
Eto izy miaraka amin'ny rahavaviny Glynda, izay nilaza fa nalaina ankeriny koa izy hatramin'ny fahazazany. Hatramin'ny firy taona? Tadidinao ve? GLYNDA: Dimy. WINFREY: Dimy taona.
Ary inona no nitranga fony ianao dimy taona? Ny sasany amin'ireo nofariparitan'i Dr. Mack teo aloha? GLYNDA: Marina. Nanana fahatsiarovan-tena aho - nahatsiaro ny zavatra niainako tamin'izaho dimy taona.
WINFREY: Mm-hmm. GLYNDA: Ary - saingy nanana ampahany tsy hita tao aho. Ary ny tadidiko dia tamin'ny alalàn'ny rindriko nisy olona vitsivitsy nanodidina ny fandriako.
Ary nihazakazaka namaky teo anelanelan'izy ireo aho ary nihazakazaka nivoaka ny efitrano nankao amin'ny efitranon'ny reniko mba hiery azy ireo. Ary ny zava-nitranga dia nanaraka ahy tao izy ireo. Ary izany no zavatra farany tadidiko.
Mahaliana anefa izany satria rehefa afaka izany dia tsy niresaka tamin'iza tamin'iza aho. Ary naleviko tao an-tsaiko tao anaty - in -. Ary izaho sy ny rahalahiko dia tsy mbola niresaka momba izany izahay raha tsy taona vitsivitsy lasa izay.
WINFREY: Fa maninona? RANDY mangatsiaka: Nolazaiko voalohany tamin'ny reniko sy ny dadako rehefa nisy zavatra nitranga - fony aho 10 taona. Ary nambarako tamin'ny reniko sy ny dadako izany. WINFREY: tadidinao ve ny fotoana nilazany taminao? Renin'i Randy ianao.
Renin'i Randy: Ie. WINFREY: Inona no nolazainy taminao? Mitsangàna, azafady. Ny renin'i Randy: Eny, niverina tany amin'ny mpiara-miasa izy - taona vitsivitsy lasa izay
WINFREY: O-huh. Renin'i Randy: nipetraka lavitra ny trano ny zanako vavy.
Ary noraisiny ilay boky 'Communion'. WINFREY: O-huh. Ny renin'i Randy: Ary nilaza izy fa izany dia nanelingelina azy.
Ka nanandrana nifandray aho. WINFREY: Zanaka vavy iza? Glynda? Ny renin'i Randy: Glyndie. WINFREY: Mm-hmm.
GLYNDA: Ie. Tsy nahita tory tamin'ny alina. Renin'i Randy: Novakiako àry ilay boky.
Ary sendra nisakafo hariva ny zanako lahy. Ary teo izahay mivady. Ary hoy aho: 'O, tena mahasosotra izany.' Ary hoy izy: 'Eny, tsy tadidinao ve tamin'izaho 10 taona?' Ary toy ny nijanona tao ambadiky ny saintsika izany.
amazona volafotsy gopro
Ary samy nilaza izahay hoe: 'Eny eh.' Tadidiko fa niditra tao amin'ny efitranontsika izy ary
WINFREY: Ary hoy? Renin'i Randy: ary nilaza fa misy sambon-danitra eny ivelany ary bandy kely manodidina ny fandriany.
Renin'i Randy: Ary napetrak'izy ireo ilay alika. Hafahafa izay toa hafahafa. Eny
WINFREY: kely noho ny hafahafa. Ny renin'i Randy: Oh. WINFREY: Tena.
Ny renin'i Randy: Saingy - fa - ka nivoaka ny vadiko
WINFREY: Rehefa nilaza taminao izy tamin'ny 10 taona, dia hoy ianao: 'Ie, marina, ry malala.' Renin'i Randy: Tsia. Nivoaka tany ivelany ny vadiko ary nieritreritra izy fa mety hiditra an-tsehatra izany.
Nilamina aho - tsy nisy niditra an-tsehatra ka hitanay izy. Natoryiko izy ary tsy nieritreritra an'izany intsony izahay mandra-pahatongan'ny
WINFREY: Nisy niditra an-tsehatra ve sa tsia? Tsy reko ny nolazainao
Renin'i Randy: Tsy izany. WINFREY: Tsy mpiditra an-tsehatra. Ny renin'i Randy: Tsy hoe fantatray izany.
WINFREY: Ka nolazainao taminy fa
Renin'i Randy: Ie, azoko antoka
WINFREY: noforoniny ve izany? Renin'i Randy: Tsy tadidiko akory ny nilazako azy an'izany.
RANDY: Tsia. WINFREY: Inona no tadidinao, Randy? RANDY: Ianao - izany - dia izay ihany. Fa ny tiako holazaina dia nihazakazaka nankany amin'ny efitranony aho, natahotra mafy.
Satria izy ireo - noroahin'izy ireo nandritra ny adiny iray mahery aho, ary rehefa tiako - fantatrao fa nihazakazaka aho - ny zavatra voalohany tsy fantatro raha hiakatra ambony aho dia ny efitranon'ny reniko sy ny dadako. Ny tiako holazaina dia io karazana tahotra io. Ary - ary - eny.
Ity dia - hitako fa sarotra izany. WINFREY: Fa maninona? RANDY: Satria tsy te hino an'io aho. Tena tsy izany aho.
fanatanjahan-tena chopper hazo
WINFREY: Fa maninona? Satria mieritreritra aho fa tsy hampaninona ahy raha sendra ahy izany. RANDY: Ie. Samy milaza izany ny rehetra.
GLYNDA: Mbola tsy nitranga taminao izany. Raha sendra anao io dia hafa ny fahatsapanao. RANDY: Samy milaza izany daholo.
Saingy - Ny tiako holazaina dia nahatonga ahy hanontany tena ny amin'ny fiainana io. Ary io - izy - dia tena nanetsika ny fiainako. Ary
WINFREY: Rehefa nitranga tamin'ny 10 dia nino foana ianao
RANDY: Tsia. Manantena aho fa nisy zavatra tsy nety. Manantena aho fa misy zavatra tsy mety.
Ary nanana be dia be aho - Nandalo fitsapana sy zavatra maro aho hahitana raha nisy zavatra tsy nety. WINFREY: Ka izany no fotoana voalohany nitrangan'izany - indray. Ie? RANDY: Ie.
GLYNDA: Tsy nahita zavatra tsy nety ianao. WINFREY: Ie. RANDY: Mm-hmm.
RANDY: Ary tamin'ny 1990 dia niverina izy ireo. Ary nahatsiaro ho dimy segondra angamba aho talohan'ny nandringanan'izy ireo ahy. WINFREY: Ka taitra ianao? RANDY: Ie.
WINFREY: Ary inona no nitranga? RANDY: Ianao - niditra izy ireo. Tsy fantatro hoe avy aiza izy ireo. Midika izany fa tonga haingana tany izy ireo.
WINFREY: Taiza ianao? RANDY: nandry teo ambony fandriako fotsiny aho. Vao nidina tany amin'ny efitranoko aho. Vao avy natory aho dia teo noho eo.
Teo fotsiny izy ireo. Ary - wow. Izany - izaho - dia taitra tampoka aho.
Noheveriko fa ho faty aho. Ny - ny fiainako dia nirehitra teo imasoko. Ary fotsiny aho - tadidiko ny fotoana rehetra niarahan'izy ireo teo aloha - mba hahazoana ahy.
Ary - ary dia noroahin'izy ireo aho avy eo. Ary tsaroako kely fotsiny ny zava-nitranga taorian'io fotoana io. Fa ny mandondona ahy dia ny mihaona amin'ireo olona hafa nanana izany.
Izay no mandroaka ahy. Satria miresaka amin'izy ireo aho ary fantatr'izy ireo izay lazaiko. Izy ireo - manana - afaka izy ireo - mamaritra ny zavatra mitovy.
Ary mandondona ahy fotsiny io. Ny tiako holazaina dia ny, - ny tiako holazaina, ny - iriko tsy hitranga izany. Saingy mahazo be aho - inona no antsoinao hoe --Mivoatra - amin'ny alàlan'ny firesahana amin'ny olon-kafa fotsiny fa tsy izany dia tsy fahita firy, ary ity dia
WINFREY: fantatro. Mbola mahita sy mandre anao daholo izahay rehetra
RANDY: fantatro. I - I
WINFREY: eritrereto izany - fa aiza ny porofo? RANDY: Enga anie ka mba nanana aho.
GLYNDA: Marina. Eny, izany amin'ny
WINFREY: Voalazanao ihany. Maninona raha tsy - rehefa mitranga izany dia mitranga foana. Dr.
Hanontany i Mack fa, fantatrao, rahoviana - rehefa miverina isika maninona raha maka sary azy ireo? Maninona raha entinao miaraka aminao
GLYNDA: Manana izahay. RANDY: Efa - vitako - nanandrana aho. Mahalala tsara momba ny elektronika aho ary nanandrana fakan-tsary, fakantsary misy sivana mihetsika, ary fakantsary lahatsoratra.
GLYNDA: Tripwires. RANDY: Ny zava-drehetra.
Inona no mitranga raha manao tetezana mametaka isan'andro aho?
Manao tetezana isan'andro(indrindra aorian'ny fipetrahana maharitra) dia hanampy amin'ny 'fifohazana' nygluteary avereno ny valahana. Manampy ny vatana hahatadidy ny fampiasana ny valahany izany (glute) mamorona hetsika fa tsy ny hazondamosin'ny valan-javaboary marefo kokoa.28 Mey 2021
Mitovy ve ny fanosehana ny valahana sy ny tetezana?
Hip thrust. Ireo fanazaran-tena roa ireo dia midika hoe mametaka ny anaogluteary manaingaandilanymanakatra ny valindrihana. Nytetezana glutedia matetika atao amin'ny soroka amin'ny tany, rahafamindrana hipMatetika atao amin'ny soroka eo amin'ny dabilio na lampihazo.15 apr 2019
Inona no atao amin'ny fakana ankeriny ny valahana?
Anatomy an'nyfakana ankeriny
nympaka ankerinyNy hozatra dia misy ny gluteus medius, gluteus minimus, ary ny tensor fasciae latae (TFL). Tsy vitan'ny hoe esorin'izy ireo hiala ny vatana ny tongotra, fa izy ireo koa dia manampy amin'ny fihodinana ny tongotra amin'nyvalahanairaisana. nympaka ankeriny hipilaina amin'ny fijanonana milamina rehefa mandeha na mijoro amin'ny tongotra iray.
Mampiorina hozatra ve ny famintinana ny glutes anao?
Ary raha mbolaglutetetezana angamba tonga ao an-tsaina ho iray amin'ireonyfanazaran-tena tsara indrindra, fikarohana vaovao avy ao amin'ny Wichita State University dia milaza fa misy fomba mahomby kokoa - ary mety kokoamanangana hozatra: famintinana gluteal. Ie, tsotramanery ny glute anao. Tsy ilaina ny lanjany - na koanymila mialanyseza.29 Jul. Desambra 2019
Inona no atao hoe fakana an-keriny amin'ny antsasaky ny tetezana?
Mandry eo ankavianaolafinymiaraka amin'ny kiho eo ambanin'ny sorokao sy ny tongotrao mifatotra. Atsangano farafahakeliny 6 santimetatra (B) ny tongotrao havanana. Ahena ary avereno. Fenoy ny repoblika rehetra, avy eo avereno eo ankavananaolafiny. Set 1 izany.29 nov 2007 taona
Manampy amin'ny famoizana tavy amin'ny kibo ve ny tetezana glute?
Voalaza fa nytetezanapose raha vita tsy tapaka, afakaVonjeoahenao nytavy kiboamin'ny fitazonana ny hozatra manohana matanjaka. Ny sasany amin'ireo tombontsoa ara-pahasalamana an'nymanaoSetu Bandhasana dia misy fanatsarana ra mivezivezy sy fandevonan-kanina tsara kokoa. nytetezanapose koa mamelatra ny hatoka, hazondamosina, tratra ary ny valahany.3 Okt 2019
Tsara kokoa ve ny tetezana amin'ny glute noho ny squats?
Betsaka ny fampihetseham-batanatsara kokoa noho ny squatsmba hanananao tanjaka amin'nygluteary ny vatana ambany. Raha tokony hanaosquatsmba hahatratrarana ny tanjon'ny tanjonao dia manome torohevitra ahoglute-hetsika manokana toy nytetezana glute, fanindronana ny valahana ary fananganana maty.28 apr 2021
Ahoana ny fomba hanaovana ny tetezana glute fakana an-keriny ho an'ny lehilahy?
Mety hahazo komisiona amin'ny alàlan'ny rohy ao amin'ny tranokalanay izahay. Mianjerà amin'ny tany amin'ny lohalika miaraka amin'ny lohalika ary ny tongotrao amin'ny tany. Afatory ny bandy fanaovana fanatanjahan-tena manodidina ny volanao, eo ambanin'ny lohalinao fotsiny. Mitazona ny fihenjanana eo amin'ny tarika manerana, atsangano ny valahanao mandra-pahatonga ny vatanao hanamboatra tsipika mahitsy manomboka amin'ny soroka mankany amin'ny lohalika.
Aiza no hametrahana ny tetezana glute mini band?
Mba hanaovana ny Mini Band Glute Bridge dia apetraho eo amin'ny lohalinao ny fatorana na eo ambany na eo ambonin'ny lohalinao. Ny fametrahana azy eo ambony dia mora kokoa ny manasaraka ny glute anao raha tsy tsapanao fa miasa izy ireo. Ny fametrahana ny Mini Band eo ambanin'ny lohalinao dia mitaky ny mavitrika kokoa ny glute anao.
Ahoana no fomba hahatratrarana ny tetezana misy glute miaraka amin'ny lozam-pifamoivoizana?
Mba hanaovana ny Bridge Glute miaraka amin'ny fihodinam-bokatra mihodina, atsangano toy ny hoe manao ny Bridge Glute Bridge ianao. Mandry eo an-damosinao ary miondrika ny lohalinao ary mivelatra amin'ny tany ny tongotrao. Ny tongotrao dia tokony ho eo amin'ny sakan'ny valahany ary ny lohalinao dia tokony hifanaraka amin'ny tongotrao sy ny valahanao.